2016 | Language Century Language Century
2:24 AM C-Draw , Chinese
ဒီစာလုံးလေးကတော့ မသိလို့ကို မဖြစ်လောက်အောင် အရေးကြီးပါတယ်။ တရုတ်ဘာသာစကား စသင်တာနဲ့ မပြောမဖြစ် ပြောရတဲ့ စာလုံးလေးမို့လို့ပါ။ အဲဒါကတော့ “မရှိပါ” 没 ဆိုတဲ့ စာလုံးလေးပါ။
2:18 AM C-Draw , Chinese
“ခေါ်သည်၊ အော်သည်၊ ခိုင်းသည်” လို့ အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ တရုတ်စာလုံးလေးကတော့ 叫ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရေးသား လေ့ကျင့်ကြည့်ကြပါစို့။
2:09 AM C-Draw , Chinese
“ဆော့သည်၊ လည်ပတ်သည်” လို့ အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ တရုတ်စာလုံးလေးကတော့ 玩 ပဲဖြစ်ပါတယ်။ စုတ်ချက်အဆင့်ဆင့်ကို စနစ်တကျ ရေးသားကြပါစို့။
1:51 AM C-Draw , Chinese
电 ဆိုတာက မြန်မာလို “လျှပ်စစ်” ကို ပြောတာပါ။ “ကွန်ပျူတာ၊ ရုပ်ရှင်၊ ဖုန်း” စတဲ့ ဝေါဟာရတွေကို ဒီစာလုံးနဲ့ ရေးပါတယ်။
1:43 AM C-Draw , Chinese
ဒီနေ့ လေ့ကျင့်ကြမယ့် တရုတ်စာလုံးလေးက 晚 ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာလို အဓိပ္ပာယ်ကတော့ “ည။ နောက်ကျသည်” ပေါ့။
1:23 AM C-Draw , Chinese
方 ဆိုတာက မြန်မာလို “...ဘက်၊ ...ဖက်” ကို ပြောတာပါ။ ဒီတရုတ်စာလုံးလေးကလည်း လေ့ကျင့်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
2:01 AM C-Draw , Chinese
安 ဆိုတာက “လုံခြုံသည်” လို့ အဓိပ္ပာယ် ရပါတယ်။ နှုတ်ဆက်စကားတွေ ပြောဆိုရာမှာ သုံးလေ့ရှိတဲ့ တရုတ်စာလုံးလေး ဖြစ်ပါတယ်။
1:55 AM C-Draw , Chinese
公 ဆိုတဲ့ တရုတ်စာလုံးလေးကလည်း ရေးရတာ လွယ်ကူသလို၊ အသုံးလည်း များပါတယ်။ “အများပိုင်” လို့ အဓိပ္ပာယ် ရပါတယ်။
1:50 AM C-Draw , Chinese
为 ဆိုတာကတော့ “အတွက်၊ အား” လို့ အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ တရုတ်စာလုံးလေး တစ်လုံးပါ။ စုတ်ချက် လေးချက်သာရှိပြီး လေ့ကျင့်ရတာလည်း လွယ်ကူမှာပါ။
因 ဆိုတာက “အကြောင်း၊ ကြောင့်” လို့ အဓိပ္ပာယ် ရပါတယ်။ ဒီတရုတ်စာလုံးလေးရဲ့ စုတ်ချက်ဆွဲနည်းအဆင့်ဆင့်ကို စနစ်တကျ လေ့လာကြပါစို့။
1:29 AM C-Draw , Chinese
“ပြောသည်” ဆိုတာကို တရုတ်လို 说 လို့ ပြောပါတယ်။ ဒီစာလုံးလေးကလည်း အသုံးအများဆုံး ဝေါဟာရလေးမို့ ကျက်မှတ်ထားသင့်ပါတယ်နော်။
1:48 AM C-Joke , Chinese
တော်သေးတာပေါ့၊ ၉၉ လှမ်းပဲ လှမ်းရသေးလို့၊ ခြေလှမ်း ၁၀၀ ပြည့်သွားရင်တော့ မတွေးရဲစရာပဲ။ နောက်က ကပ်လိုက်လာတာ အကောင်းတော့ မထင်နဲ့နော်။
ယောင်္ကျားလေးက ပြောတယ် " လမ်းခွဲကြရအောင် " ။
မိန်းကလေးက ပြောတယ် " ကောင်းပြီလေ " ။
ယောင်္ကျားလေးက ပြောတယ် " တို့တွေ ( ကျောခိုင်းပြီး ) ခြေလှမ်းတစ်ရာ ပြည့်အောင်လျှောက်မယ်၊ ပြီးရင် ပြန်လှည့်လာပြီး သူငယ်ချင်းတွေလိုပဲ နေသွားကြမယ်လေ " ။
မိန်းကလေးက ထပ်ပြောတယ် " ကောင်းပါပြီ " ။
ယောင်္ကျားလေးက ခန္ဓာကိုယ်ကို လှည့်လိုက်တယ်၊ မျက်လုံးထဲမှာ မျက်ရည်တွေ ရစ်ဝိုင်းပြီး လျှောက်သွားတာ ခြေလှမ်း ၉၉ လှမ်းအထိ ရောက်သွားပြီ။
နောက်ဆုံးမှာတော့ မျိုသိပ်ထားနိုင်စွမ်း မရှိတော့ဘဲ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့၊ မိန်းကလေးက သူ့နောက်မှာရပ်နေတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်။
မိန်းကလေးက သူ့ကိုကြည့်ပြီး ပြောလိုက်တယ် " တကယ်လို့ ရှင်သာ လှည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်၊ ကျွန်မက ရှင့်နောက်မှာ ထပ်ကြပ်မကွာ ရှိနေတာကို ရှင်တွေ့ရမှာပါ " ။
ယောင်္ကျားလေးက ငိုရင်းနဲ့ မိန်းကလေးကို ဖက်ထားလိုက်တယ်။
မိန်းကလေးက သူမနောက်ကျောမှာ ဝှက်ထားတဲ့ ( ဝှက်ယူလာတဲ့ ) အုတ်ခဲကျိုးကို တိတ်တိတ်လေး လွှင့်ပစ်လိုက်တော့တယ် ......
1. 男人〔nánrén〕 ယောင်္ကျားလေး
2. 说〔shuō〕 ပြောသည်
6. 好〔hǎo〕 ကောင်းသော
8. 走〔zǒu〕 လျှောက်သည်
10. 步〔bù〕 ခြေလှမ်း
11. 以后〔yǐhòu〕ထို့နောက်။ နောက်နောင်
12. 见面〔jiànmiàn〕 တွေ့ဆုံသည်
13. 还〔hái〕... သေးသည်
14. 是〔shì〕ဟုတ်သည်။ ဖြစ်သည်
16. 又〔yòu〕ထပ်၍။ ... လည်း
17. 转身〔zhuǎnshēn〕ခန္ဓာကိုယ်ကို လှည့်လိုက်သည်
18. 含泪〔hán lèi〕မျက်ရည်များ ဝိုင်းစို့၍
19. 着〔zhe〕... နေတုန်း။ နေဆဲ
20. 了〔le〕... ပြီးပြီ။ ခဲ့တယ်
21. 99步〔jiǔshíjiǔ bù〕 ခြေလှမ်း ၉၉ လှမ်း
22. 最后〔zuìhòu〕 နောက်ဆုံး။ အဆုံးစွန်
23. 忍不住〔rěnbúzhù〕မအောင့်အည်းနိုင်။ မျိုသိပ်၍မရ
24. 回头〔huítóu〕 ခေါင်းလှည့်သည်။ နောက်မှ
25. 却〔què〕... တော့
26. 看到〔kàndào〕 တွေ့ရသည်
29. 在〔zài〕... မှာ။ မှာရှိသည်
30. 自己〔zìjǐ〕မိမိ။ ကိုယ်တိုင်
32. 后〔hòu〕 နောက်
35. 只要〔zhǐyào〕...မယ် ဆိုရင်။ ... သာ
36. 你〔nǐ〕သင်။ မင်း
37. 肯〔kěn〕သဘောတူသည်။ လိုသည်
38. 会〔huì〕... လိမ့်မည်။ တတ်သည်
39. 发现〔fāxiàn〕 တွေ့ရှိသည်
40. 我〔wǒ〕ငါ။ ကျွန်တော်
41. 一直〔yìzhí〕 တောက်လျှောက်။ တည့်တည့်
44. 悄悄地〔qiāoqiao de〕တိတ်တဆိတ်နဲ့
46. 藏〔cáng〕ဝှက်သည်။ ဝှက်ထားသည်
47. 背后〔bèihòu〕 နောက်ကျောဘက်
48. 的〔de〕ရဲ့။ က
တျောသေးတာပေါ့၊ ၉၉ လှမျးပဲ လှမျးရသေးလို့၊ ခွလှေမျး ၁၀၀ ပွညျ့သှားရငျတော့ မတှေးရဲစရာပဲ။ နောကျက ကပျလိုကျလာတာ အကောငျးတော့ မထငျနဲ့နျော။
ယောကငြ်္ားလေးက ပွောတယျ " လမျးခှဲကွရအောငျ " ။
မိနျးကလေးက ပွောတယျ " ကောငျးပွီလေ " ။
ယောကငြ်္ားလေးက ပွောတယျ " တို့တှေ ( ကြောခိုငျးပွီး ) ခွလှေမျးတဈရာ ပွညျ့အောငျလြှောကျမယျ၊ ပွီးရငျ ပွနျလှညျ့လာပွီး သူငယျခငျြးတှလေိုပဲ နသှေားကွမယျလေ " ။
မိနျးကလေးက ထပျပွောတယျ " ကောငျးပါပွီ " ။
ယောကငြ်္ားလေးက ခန်ဓာကိုယျကို လှညျ့လိုကျတယျ၊ မကျြလုံးထဲမှာ မကျြရညျတှေ ရဈဝိုငျးပွီး လြှောကျသှားတာ ခွလှေမျး ၉၉ လှမျးအထိ ရောကျသှားပွီ။
နောကျဆုံးမှာတော့ မြိုသိပျထားနိုငျစှမျး မရှိတော့ဘဲ လှညျ့ကွညျ့လိုကျတော့၊ မိနျးကလေးက သူ့နောကျမှာရပျနတောကို တှလေို့ကျရတယျ။
မိနျးကလေးက သူ့ကိုကွညျ့ပွီး ပွောလိုကျတယျ " တကယျလို့ ရှငျသာ လှညျ့ကွညျ့မယျဆိုရငျ၊ ကြှနျမက ရှငျ့နောကျမှာ ထပျကွပျမကှာ ရှိနတောကို ရှငျတှရေ့မှာပါ " ။
ယောကငြ်္ားလေးက ငိုရငျးနဲ့ မိနျးကလေးကို ဖကျထားလိုကျတယျ။
မိနျးကလေးက သူမနောကျကြောမှာ ဝှကျထားတဲ့ ( ဝှကျယူလာတဲ့ ) အုတျခဲကြိုးကို တိတျတိတျလေး လှငျ့ပဈလိုကျတော့တယျ ......
1. 男人〔nánrén〕 ယောကငြ်္ားလေး
2. 说〔shuō〕 ပွောသညျ
6. 好〔hǎo〕 ကောငျးသော
8. 走〔zǒu〕 လြှောကျသညျ
10. 步〔bù〕 ခွလှေမျး
11. 以后〔yǐhòu〕ထို့နောကျ။ နောကျနောငျ
12. 见面〔jiànmiàn〕 တှဆေုံ့သညျ
13. 还〔hái〕... သေးသညျ
14. 是〔shì〕ဟုတျသညျ။ ဖွဈသညျ
16. 又〔yòu〕ထပျ၍။ ... လညျး
17. 转身〔zhuǎnshēn〕ခန်ဓာကိုယျကို လှညျ့လိုကျသညျ
18. 含泪〔hán lèi〕မကျြရညျမြား ဝိုငျးစို့၍
19. 着〔zhe〕... နတေုနျး။ နဆေဲ
20. 了〔le〕... ပွီးပွီ။ ခဲ့တယျ
21. 99步〔jiǔshíjiǔ bù〕 ခွလှေမျး ၉၉ လှမျး
22. 最后〔zuìhòu〕 နောကျဆုံး။ အဆုံးစှနျ
23. 忍不住〔rěnbúzhù〕မအောငျ့အညျးနိုငျ။ မြိုသိပျ၍မရ
24. 回头〔huítóu〕 ခေါငျးလှညျ့သညျ။ နောကျမှ
25. 却〔què〕... တော့
26. 看到〔kàndào〕 တှရေ့သညျ
29. 在〔zài〕... မှာ။ မှာရှိသညျ
30. 自己〔zìjǐ〕မိမိ။ ကိုယျတိုငျ
32. 后〔hòu〕 နောကျ
35. 只要〔zhǐyào〕...မယျ ဆိုရငျ။ ... သာ
36. 你〔nǐ〕သငျ။ မငျး
37. 肯〔kěn〕သဘောတူသညျ။ လိုသညျ
38. 会〔huì〕... လိမျ့မညျ။ တတျသညျ
39. 发现〔fāxiàn〕 တှရှေိ့သညျ
40. 我〔wǒ〕ငါ။ ကြှနျတျော
41. 一直〔yìzhí〕 တောကျလြှောကျ။ တညျ့တညျ့
44. 悄悄地〔qiāoqiao de〕တိတျတဆိတျနဲ့
46. 藏〔cáng〕ဝှကျသညျ။ ဝှကျထားသညျ
47. 背后〔bèihòu〕 နောကျကြောဘကျ
48. 的〔de〕ရဲ့။ က
Source : Du Chinese
1:29 AM C-Text , Chinese
လူတွေရဲ့ မျက်နှာပြင် သို့မဟုတ် ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ မတူညီတဲ့ မှဲ့အမျိုးမျိုး ရှိကြတယ်။ သင့်မှာရော ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုမှဲ့မျိုး ရှိပါသလဲ။
你 的 脸 上 或 者 身 上 有 痣 吗 ？
သင့်ရဲ့မျက်နှာပေါ် ဒါမှမဟုတ် ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ မှဲ့ရှိပါသလား။
痣 简 单 地 说 ，就 是 长 在 皮 肤 上 的 小 点 点 ，一 般 是 黑 色 的 。
လွယ်လွယ်ပြောရရင် မှဲ့ဆိုတာဟာ အရေပြားပေါ်မှာ ပေါက်နေတဲ့ အစက်သေးသေးလေးပဲပေါ့၊ ယေဘုယျအားဖြင့် အမဲရောင်ပါ။
别 看 这 小 小 的 痣 ，不 同 的 痣 有 不 同 的 寓 意 。
မှဲ့သေးသေးလေး ဆိုပေမယ့်လည်း၊ မှဲ့အမျိုးမျိုးမှာ အဓိပ္ပာယ်ဖော်ဆောင်ချက် အမျိုးမျိုး ရှိနေကြတယ်။
在 中 国 ，长 在 脸 上 不 同 部 位 的 痣 有 不 同 的 名 字 。
တရုတ်ပြည်မှာတော့၊ မျက်နှာပေါ်မှာပေါက်တဲ့ မှဲ့တွေရဲ့ တည်နရာကိုလိုက်ပြီး အခေါ်အဝေါ် အမျိုးမျိုးရှိကြတယ်။
比 如 长 在 嘴 巴 旁 边 的 痣，叫 美 人 痣 ；长 在 下 巴 的 叫 好 吃 痣 ；长 在 眼 睛 下 方 的 叫 汨 痣 ……
ဥပမာအားဖြင့် ပါးစပ်ဘေးမှာ ပေါက်တဲ့မှည့်ကို စံပယ်တင်မှဲ့လို့ ခေါ်တယ်၊ မှေးစေ့မှာ ပေါက်တဲ့မှည့်ကို အစားပုပ်မှဲ့လို့ ခေါ်တယ်၊ မျက်လုံးအောက်ဘက်မှာ ပေါက်တာကိုတော့ မျက်ရည်ခံမှဲ့လို့ ခေါ်ပါတယ်။
每 颗 痣 也 有 不 同 的 寓 意 。
မှဲ့တစ်လုံးချင်းစီမှာ အဓိပ္ပာယ်ဖော်ဆောင်ချက် အမျိုးမျိုးရှိကြတယ်။
比 如 有 美 人 痣 的 人 会 一 生 感 情 美 满 ；
ဥပမာအားဖြင့် စံပယ်တင်မှဲ့ ရှိတဲ့သူက ဘဝတလျှောက်လုံး မေတ္တာတရားတွေ ထုံမွှမ်းပြီး သာယာပြည့်စုံနေလိမ့်မယ်၊
有 好 吃 痣 的 人 一 生 都 有 好 口 福 ，经 常 有 机 会 吃 吃 喝 喝 ；
အစားပုပ်မှဲ့ ရှိတဲ့သူကတော့ ဘဝတလျှောက်လုံးမှာ စားရကံတွေ ကြုံနေမှာပါ၊ စားဖို့သောက်ဖို့ အခွင့်အရေးတွေလည်း မကြာခဏ ရှိနေပါလိမ့်မယ်၊
有 泪 痣 的 人 寓 意 一 生 为 爱 所 苦 ，被 情 所 困 ，且 容 易 流 泪 ……
မျက်ရည်ခံမှဲ့ ရှိတဲ့သူကတော့ ဘဝတလျှောက်လုံးမှာ အချစ်အတွက် ခံစားရပြီး၊ မေတ္တာရေးမှာ ခက်ခဲရုံသာမက မျက်ရည်ကျဖို့လည်း လွယ်ကူပါလိမ့်မယ်၊
痣 的 寓 意 有 好 的 也 有 坏 的 。
မှဲ့တွေရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖော်ဆောင်ချက်တွေက ကောင်းတာလည်း ရှိသလို၊ မကောင်းတာလည်း ရှိပါတယ်။
手 掌 或 者 脚 底 有 痣 的 是 好 的 ，这 样 的 人 有 财 运 ，一 生 不 愁 吃 不 愁 穿 。
လက်ဖဝါး သို့မဟုတ် ခြေဖဝါးအောက်မှာ ရှိတဲ့ မှည့်တွေက ကောင်းပါတယ်၊ ဒီလိုလူမျိုးတွေဟာ စီးပွားဥစ္စာ တိုးတက်ပြီး၊ ဘဝတလျှောက်လုံးမှာ စားဖို့ဝတ်ဖို့ မပူပင်ရဘူး။
相 反 ，脚 背 有 痣 是 不 好 的 ，这 样 的 人 运 气 不 太 好 ，终 生 劳 碌 。
အဲဒါနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ကတော့၊ ခြေဖမိုးမှာ မှဲ့ရှိတာ မကောင်းဘူး၊ ဒီလိုလူမျိုးတွေက ကံသိပ်မကောင်းကြသလို၊ ဘဝတလျှောက်လုံးမှာ ပင်ပင်ပန်းပန်း လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြရတယ်။
当 然 这 些 都 是 民 间 的 迷 信 ，不 足 为 信 。
ဒါတွေအားလုံးဟာ လူတွေရဲ့ အယူသည်းမှုတွေဆိုတော့၊ တကယ် ယုံကြည်ဖို့တော့ မသင့်ပါဘူး။
但 是 直 至 今 日 ，很 多 人 要 点 痣 时 还 是 会 先 看 看 ，要 点 的 痣 代 表 的 是 什 么 意 思 。
ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ချိန်ထိ လူတွေဟာ မှဲ့ဖျက်တော့မယ်ဆိုရင်၊ ဖျက်မယ့်မှဲ့ဟာ ဘာအဓိပ္ပာယ်ကို ကိုယ်စားပြုလဲဆိုတာကို အရင်ဆုံး ကြည့်လေ့ရှိကြတယ်။
如 果 要 点 的 痣 是 寓 意 好 的 痣 ，就 不 点 了 ，只 点 寓 意 不 好 的 痣 。
တကယ်လို့ ဖျက်မယ့်မှဲ့ဟာ အဓိပ္ပာယ်ဖော်ဆောင်ချက် ကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ မဖျက်ကြတော့ဘူး၊ အဓိပ္ပာယ်ဖော်ဆောင်ချက် မကောင်းတဲ့ မှဲ့ကိုသာ ဖျက်ကြတာပါ။
1. 你〔nǐ〕မင်း။ ခင်ဗျား။ သင်
2. 的〔de〕ရဲ့။ ၏။ သော။ က။ ဟာ
4. 上〔shang〕အပေါ်။ တက်သည်
5. 或者〔huòzhě〕သို့မဟုတ်။ ဒါမှမဟုတ်
9. 吗〔ma〕လား။ သလား
10. 简单〔jiǎndān〕ရိုးရိုး။ လွယ်ကူသော
11. 地〔de〕... စွာ။ နဲ့
12. 说〔shuō〕 ပြောသည်
15. 长〔zhǎng〕 ပေါက်ခြင်း။ ကြီးပြင်းလာခြင်း
16. 在〔zài〕မှာ။ မှာရှိသည်
19. 一般〔yìbān〕သာမန်။ ယေဘုယျ
21. 别〔bié〕မ ... နဲ့
23. 这〔zhè〕ဒါ။ ဒီဟာ
24. 小小的〔xiǎoxiaode〕 သေးသေးလေး
25. 不〔bù〕မ ( အငြင်း )
29. 部位〔bùwèi〕 နေရာ။ ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း
33. 旁边〔pángbiān〕 ဘေးဘက်
34. 叫〔jiào〕 ခေါ်သည်
36. 下巴〔xiàbā〕 မေးစေ့
39. 下方〔xiàfāng〕 အောက်ဘက်
41. 每〔měi〕... တိုင်း
42. 颗〔kē〕... လုံး။ အလုံး
43. 也〔yě〕လည်း။ လည်းပဲ
45. 会〔huì〕... လိမ့်မည်။ တတ်သည်
47. 感情〔gǎnqíng〕သံယောဇဉ်။ မေတ္တာ
48. 美满〔měimǎn〕 ကောင်းမွန်သာယာသည်
51. 经常〔jīngcháng〕အမြဲတမ်း။ မကြာခဏ
53. 吃吃喝喝〔chīchī hēhē〕စားခြင်းသောက်ခြင်း
54. 为爱所苦〔wèi ài suǒ kǔ〕အချစ်အတွက် ခံစားရခြင်း
55. 被情所困〔bèi qíng suǒ kùn〕 မေတ္တာရေးမှာ ခက်ခဲခြင်း
59. 坏〔huài〕ဆိုးခြင်း။ မကောင်းခြင်း
61. 脚底〔jiǎodǐ〕 ခြေဖဝါးအောက်
63. 财运〔cáiyùn〕လာဘ်လာဘ။ စီးပွား
64. 不愁吃不愁穿〔bùchóuchī bùchóuchuān〕စားဖို့ဝတ်ဖို့ မပူရ
65. 相反〔xiāngfǎn〕 ပြောင်းပြန်ဖြစ်ခြင်း
66. 脚背〔jiǎobèi〕 ခြေဖမိုး
67. 运气〔yùnqì〕ကံ။ ကံကြမ္မာ
68. 太〔tài〕အရမ်း။ သိပ်
70. 劳碌〔láolù〕အလုပ်များပြီး ပင်ပန်းလှသည်
71. 当然〔dāngrán〕... တာပေါ့။ မှာပေါ့
72. 这些〔zhèxiē〕ဒါတွေ။ ဒီဟာတွေ
73. 民间〔mínjiān〕 ပြည်သူများအကြား
74. 迷信〔míxìn〕အယူသည်းသည်။ အစွဲအလန်းကြီးသည်
75. 不足为信〔bù zú wéi xìn〕ယုံကြည်ဖို့မလို
77. 直至〔zhízhì〕အထိ။ ထက်တိုင်
80. 要〔yào〕... မယ်
82. 时〔shí〕... တဲ့အချိန်မှာ။ တဲ့အခါ
83. 还是〔háishì〕... ပါအုံး
84. 先〔xiān〕အရင်။ ဦးစွာ
89. 了〔le〕... ပြီးပြီ။ ခဲ့တယ်
90. 只〔zhǐ〕သာလျှင်။ ပဲ
လူတှရေဲ့ မကျြနှာပွငျ သို့မဟုတျ ခန်ဓာကိုယျပျေါမှာ မတူညီတဲ့ မှဲ့အမြိုးမြိုး ရှိကွတယျ။ သငျ့မှာရော ဘယျနရောမှာ ဘယျလိုမှဲ့မြိုး ရှိပါသလဲ။
သငျ့ရဲ့မကျြနှာပျေါ ဒါမှမဟုတျ ခန်ဓာကိုယျပျေါမှာ မှဲ့ရှိပါသလား။
လှယျလှယျပွောရရငျ မှဲ့ဆိုတာဟာ အရပွေားပျေါမှာ ပေါကျနတေဲ့ အစကျသေးသေးလေးပဲပေါ့၊ ယဘေုယအြားဖွငျ့ အမဲရောငျပါ။
မှဲ့သေးသေးလေး ဆိုပမေယျ့လညျး၊ မှဲ့အမြိုးမြိုးမှာ အဓိပ်ပာယျဖျောဆောငျခကျြ အမြိုးမြိုး ရှိနကွေတယျ။
တရုတျပွညျမှာတော့၊ မကျြနှာပျေါမှာပေါကျတဲ့ မှဲ့တှရေဲ့ တညျနရာကိုလိုကျပွီး အချေါအဝျေါ အမြိုးမြိုးရှိကွတယျ။
ဥပမာအားဖွငျ့ ပါးစပျဘေးမှာ ပေါကျတဲ့မှညျ့ကို စံပယျတငျမှဲ့လို့ ချေါတယျ၊ မှေးစမှေ့ာ ပေါကျတဲ့မှညျ့ကို အစားပုပျမှဲ့လို့ ချေါတယျ၊ မကျြလုံးအောကျဘကျမှာ ပေါကျတာကိုတော့ မကျြရညျခံမှဲ့လို့ ချေါပါတယျ။
မှဲ့တဈလုံးခငျြးစီမှာ အဓိပ်ပာယျဖျောဆောငျခကျြ အမြိုးမြိုးရှိကွတယျ။
ဥပမာအားဖွငျ့ စံပယျတငျမှဲ့ ရှိတဲ့သူက ဘဝတလြှောကျလုံး မတ်ေတာတရားတှေ ထုံမှမျးပွီး သာယာပွညျ့စုံနလေိမျ့မယျ၊
အစားပုပျမှဲ့ ရှိတဲ့သူကတော့ ဘဝတလြှောကျလုံးမှာ စားရကံတှေ ကွုံနမှောပါ၊ စားဖို့သောကျဖို့ အခှငျ့အရေးတှလေညျး မကွာခဏ ရှိနပေါလိမျ့မယျ၊
မကျြရညျခံမှဲ့ ရှိတဲ့သူကတော့ ဘဝတလြှောကျလုံးမှာ အခဈြအတှကျ ခံစားရပွီး၊ မတ်ေတာရေးမှာ ခကျခဲရုံသာမက မကျြရညျကဖြို့လညျး လှယျကူပါလိမျ့မယျ၊
မှဲ့တှရေဲ့ အဓိပ်ပာယျဖျောဆောငျခကျြတှကေ ကောငျးတာလညျး ရှိသလို၊ မကောငျးတာလညျး ရှိပါတယျ။
လကျဖဝါး သို့မဟုတျ ခွဖေဝါးအောကျမှာ ရှိတဲ့ မှညျ့တှကေ ကောငျးပါတယျ၊ ဒီလိုလူမြိုးတှဟော စီးပှားဥစ်စာ တိုးတကျပွီး၊ ဘဝတလြှောကျလုံးမှာ စားဖို့ဝတျဖို့ မပူပငျရဘူး။
အဲဒါနဲ့ ဆနျ့ကငျြဘကျကတော့၊ ခွဖေမိုးမှာ မှဲ့ရှိတာ မကောငျးဘူး၊ ဒီလိုလူမြိုးတှကေ ကံသိပျမကောငျးကွသလို၊ ဘဝတလြှောကျလုံးမှာ ပငျပငျပနျးပနျး လုပျကိုငျစားသောကျကွရတယျ။
ဒါတှအေားလုံးဟာ လူတှရေဲ့ အယူသညျးမှုတှဆေိုတော့၊ တကယျ ယုံကွညျဖို့တော့ မသငျ့ပါဘူး။
ဒါပမေယျ့ ဒီနခြေိ့နျထိ လူတှဟော မှဲ့ဖကျြတော့မယျဆိုရငျ၊ ဖကျြမယျ့မှဲ့ဟာ ဘာအဓိပ်ပာယျကို ကိုယျစားပွုလဲဆိုတာကို အရငျဆုံး ကွညျ့လရှေိ့ကွတယျ။
တကယျလို့ ဖကျြမယျ့မှဲ့ဟာ အဓိပ်ပာယျဖျောဆောငျခကျြ ကောငျးတယျဆိုရငျတော့ မဖကျြကွတော့ဘူး၊ အဓိပ်ပာယျဖျောဆောငျခကျြ မကောငျးတဲ့ မှဲ့ကိုသာ ဖကျြကွတာပါ။
1. 你〔nǐ〕မငျး။ ခငျဗြား။ သငျ
2. 的〔de〕ရဲ့။ ၏။ သော။ က။ ဟာ
4. 上〔shang〕အပျေါ။ တကျသညျ
5. 或者〔huòzhě〕သို့မဟုတျ။ ဒါမှမဟုတျ
10. 简单〔jiǎndān〕ရိုးရိုး။ လှယျကူသော
11. 地〔de〕... စှာ။ နဲ့
12. 说〔shuō〕 ပွောသညျ
15. 长〔zhǎng〕 ပေါကျခွငျး။ ကွီးပွငျးလာခွငျး
16. 在〔zài〕မှာ။ မှာရှိသညျ
19. 一般〔yìbān〕သာမနျ။ ယဘေုယြ
21. 别〔bié〕မ ... နဲ့
24. 小小的〔xiǎoxiaode〕 သေးသေးလေး
25. 不〔bù〕မ ( အငွငျး )
29. 部位〔bùwèi〕 နရော။ ကိုယျအင်ျဂါအစိတျအပိုငျး
33. 旁边〔pángbiān〕 ဘေးဘကျ
34. 叫〔jiào〕 ချေါသညျ
36. 下巴〔xiàbā〕 မေးစေ့
39. 下方〔xiàfāng〕 အောကျဘကျ
41. 每〔měi〕... တိုငျး
42. 颗〔kē〕... လုံး။ အလုံး
43. 也〔yě〕လညျး။ လညျးပဲ
45. 会〔huì〕... လိမျ့မညျ။ တတျသညျ
47. 感情〔gǎnqíng〕သံယောဇဉျ။ မတ်ေတာ
48. 美满〔měimǎn〕 ကောငျးမှနျသာယာသညျ
51. 经常〔jīngcháng〕အမွဲတမျး။ မကွာခဏ
53. 吃吃喝喝〔chīchī hēhē〕စားခွငျးသောကျခွငျး
54. 为爱所苦〔wèi ài suǒ kǔ〕အခဈြအတှကျ ခံစားရခွငျး
55. 被情所困〔bèi qíng suǒ kùn〕 မတ်ေတာရေးမှာ ခကျခဲခွငျး
59. 坏〔huài〕ဆိုးခွငျး။ မကောငျးခွငျး
61. 脚底〔jiǎodǐ〕 ခွဖေဝါးအောကျ
63. 财运〔cáiyùn〕လာဘျလာဘ။ စီးပှား
64. 不愁吃不愁穿〔bùchóuchī bùchóuchuān〕စားဖို့ဝတျဖို့ မပူရ
65. 相反〔xiāngfǎn〕 ပွောငျးပွနျဖွဈခွငျး
66. 脚背〔jiǎobèi〕 ခွဖေမိုး
67. 运气〔yùnqì〕ကံ။ ကံကွမ်မာ
68. 太〔tài〕အရမျး။ သိပျ
70. 劳碌〔láolù〕အလုပျမြားပွီး ပငျပနျးလှသညျ
71. 当然〔dāngrán〕... တာပေါ့။ မှာပေါ့
72. 这些〔zhèxiē〕ဒါတှေ။ ဒီဟာတှေ
73. 民间〔mínjiān〕 ပွညျသူမြားအကွား
74. 迷信〔míxìn〕အယူသညျးသညျ။ အစှဲအလနျးကွီးသညျ
75. 不足为信〔bù zú wéi xìn〕ယုံကွညျဖို့မလို
77. 直至〔zhízhì〕အထိ။ ထကျတိုငျ
80. 要〔yào〕... မယျ
82. 时〔shí〕... တဲ့အခြိနျမှာ။ တဲ့အခါ
83. 还是〔háishì〕... ပါအုံး
84. 先〔xiān〕အရငျ။ ဦးစှာ
89. 了〔le〕... ပွီးပွီ။ ခဲ့တယျ
90. 只〔zhǐ〕သာလြှငျ။ ပဲ
1:09 AM C-Draw , Chinese
学 ဆိုတဲ့ စာလုံးလေးကလည်း အရမ်း အသုံးများတဲ့ နေ့စဉ်သုံး ဝေါဟာရတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ “လေ့လာ သင်ယူသည်” ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် ရပါတယ်။
1:03 AM C-Draw , Chinese
今 ဆိုတာက မြန်မာလို “ယခု။ ယနေ့” စတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပါ။ အရမ်း အသုံးများတဲ့ ဝေါဟာရလေးမို့ အလွတ်ရေးသား ကျက်မှတ်ထားကြပါစို့နော်။
1:00 AM C-Draw , Chinese
“ပိတ်။ အထည်” တွေကို တရုတ်လို 布 လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီတရုတ်စာလုံးလေးကို ရေးသားလေ့ကျင့်ကြည့်ကြပါအုံးနော်။
12:55 AM C-Draw , Chinese
年 ဆိုတာက မြန်မာလို “ခုနှစ်၊ နှစ်” စတဲ့ အဓိပ္ပာယ် ဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးများတဲ့ ဝေါဟာရလေးမို့ လေ့လာကျက်မှတ်ထားသင့်ပါတယ်။
12:52 AM C-Draw , Chinese
“ထွန်းလင်း တောက်ပ” တာကို တရုတ်လို 亮 လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီဝေါဟာရလေးရဲ့ စုတ်ချက်ဆွဲနည်း အဆင့်ဆင့်ကို လေ့လာကြပါစို့နော်။
12:47 AM C-Draw , Chinese
问 ဆိုတာ မြန်မာလို “မေးမြန်းသည်” လို့ အဓိပ္ပာယ် ရပါတယ်။ ဒီတရုတ်စာလုံးလေးရဲ့ စုတ်ချက်ဆွဲပုံ အဆင့်ဆင့်ကို စနစ်တကျ လေ့ကျင့်ရေးသားကြပါစို့။
3:53 PM C-Songs , Chinese
တရုတ်သီချင်း မြူးမြူးလေးတွေကိုမှ နားထောင်ချင်သူများအတွက် တင်ပေးလိုက်ပြီနော်။ ဒီသီချင်းလေးကလည်း မြန်မာလို ရှိပါတယ်။
သီချင်းအမည် - 找自己
မြန်မာသံစဉ် - မိုးသည်းထဲမှာ (၀ိုင်ဝိုင်း)
3:20 AM C-Dialogue , Chinese
တရုတ်ပြည်က လေဆိပ်တွေမှာလည်း နိုင်ငံခြားသားတွေကို ပါးပါးလှီးမယ့် တက္ကစီသမားတွေ ရှိကြတယ်။ သူတို့စကားနဲ့ သူတို့ဥပဒေကို နားလည်ထားရင် ဒီလိုတောင် ပြန်ဟောက်လို့ရသေးတယ်။
☞ Nín hǎo, wǒ yào qù shìzhōngxīn.
☞ နင်းဟောင် ဝေါ်ယောက်ချွိ ရှစ်hကျုံးh(င်)ရှင်း
☞ မင်္ဂလာပါ၊ ငါ မြို့ထဲ သွားမလို့။
☞ Qù shìzhōngxīn èr bǎi sānshí yuán, bù dǎbiǎo.
☞ ချွိ ရှစ်hကျုံးh(င်)ရှင်း အဲာ့ပိုင်စန်းရှီးhယွမ် ပုတားပြောင်
☞ မြို့ထဲကို ယွမ် ၂၃၀ ကျမယ်၊ မီတာ မဖွင့်ဘူး။
☞ Nín bié kāiwánxiào le, wǒ suīrán shì ge wàiguórén, kěshì zài zhèlǐ zhù le wǔnián le. Dǎbiǎo jiù bāshí yuán.
☞ နင်းပြယ်ခိုင်းဝမ်ရှောက်လဲာ့ ဝေါ်စွေးရဲန်r ရှစ်hကဲာ့ ဝိုက်ကောရဲင်r ခဲယ်ရှစ်h ဇိုက်zကျဲ့hလီ ကျုhလဲာ့ဝူနျန်လဲာ့ တားပြောင်ကျို့ ပါးရှီးhယွမ်
☞ မင်း နောက်နေတာလား၊ ငါက နိုင်ငံခြားသား ဆိုပေမယ့်၊ ဒီမှာနေလာတာ ငါးနှစ်ရှိနေပြီ။ မီတာဖွင့်ရင် ယွမ် ၈၀ ပဲ ကျမယ်။
☞ Nà wǒ bú qù, nín zhǎo biéde chē ba.
☞ နာ့ ဝေါ်ပူချွိ နင်းကျောင်h ပြယ်တဲ့ချဲhပါ့
☞ ဒါဆို ငါမလိုက်ဘူး၊ မင်း တခြားကား သွားရှာလိုက်။
☞ Nín zhè shì jùzài, wǒ kěyǐ tóusù de, wǒ kànkan nín de chēpáihào.....
☞ နင်ကျဲ့ရှစ်h ကျွိဇိုက်z ဝေါ်ခဲယ်းယီထိုစုတဲ့ ဝေါ်ခန့်ခန့် နင်တဲ့ ချဲhဖိုင်ဟောက်
☞ မင်းက ခရီးသည်ကို ငြင်းတယ်ပေါ့၊ ငါ တိုင်လို့ရတယ်နော်၊ မင်းကားနံပါတ်ကို ငါကြည့်လိုက်အုံးမယ် ......
☞ Hǎo hǎo hǎo, shàng chē shàng chē.
☞ ဟောင် ဟောင် ဟောင် ရှန့်h(င်)ချဲh ရှန့်h(င်)ချဲh
☞ ဟုတ်ပါပြီ၊ ကဲ ..... တက်ပါ၊ တက်ပါ။
☞ Máfan dǎbiǎo!
☞ မားဖန်f တားပြောင်
☞ မီတာလေးတော့ ဖွင့်လိုက်အုံးနော်။
တရုတျပွညျက လဆေိပျတှမှောလညျး နိုငျငံခွားသားတှကေို ပါးပါးလှီးမယျ့ တက်ကစီသမားတှေ ရှိကွတယျ။ သူတို့စကားနဲ့ သူတို့ဥပဒကေို နားလညျထားရငျ ဒီလိုတောငျ ပွနျဟောကျလို့ရသေးတယျ။
☞ နငျးဟောငျ ဝျေါယောကျခြှိ ရှဈhကြုံးh(ငျ)ရှငျး
☞ မင်ျဂလာပါ၊ ငါ မွို့ထဲ သှားမလို့။
☞ ခြှိ ရှဈhကြုံးh(ငျ)ရှငျး အဲာ့ပိုငျစနျးရှီးhယှမျ ပုတားပွောငျ
☞ မွို့ထဲကို ယှမျ ၂၃၀ ကမြယျ၊ မီတာ မဖှငျ့ဘူး။
☞ နငျးပွယျခိုငျးဝမျရှောကျလဲာ့ ဝျေါစှေးရဲနျr ရှဈhကဲာ့ ဝိုကျကောရဲငျr ခဲယျရှဈh ဇိုကျzကြဲ့hလီ ကြုhလဲာ့ဝူနနျြလဲာ့ တားပွောငျကြို့ ပါးရှီးhယှမျ
☞ မငျး နောကျနတောလား၊ ငါက နိုငျငံခွားသား ဆိုပမေယျ့၊ ဒီမှာနလောတာ ငါးနှဈရှိနပွေီ။ မီတာဖှငျ့ရငျ ယှမျ ၈၀ ပဲ ကမြယျ။
☞ နာ့ ဝျေါပူခြှိ နငျးကြောငျh ပွယျတဲ့ခြဲhပါ့
☞ ဒါဆို ငါမလိုကျဘူး၊ မငျး တခွားကား သှားရှာလိုကျ။
☞ နငျကြဲ့ရှဈh ကြှိဇိုကျz ဝျေါခဲယျးယီထိုစုတဲ့ ဝျေါခနျ့ခနျ့ နငျတဲ့ ခြဲhဖိုငျဟောကျ
☞ မငျးက ခရီးသညျကို ငွငျးတယျပေါ့၊ ငါ တိုငျလို့ရတယျနျော၊ မငျးကားနံပါတျကို ငါကွညျ့လိုကျအုံးမယျ ......
☞ ဟောငျ ဟောငျ ဟောငျ ရှနျ့h(ငျ)ခြဲh ရှနျ့h(ငျ)ခြဲh
☞ ဟုတျပါပွီ၊ ကဲ ..... တကျပါ၊ တကျပါ။
☞ မားဖနျf တားပွောငျ
☞ မီတာလေးတော့ ဖှငျ့လိုကျအုံးနျော။
3:12 AM C-Text , Chinese
တော်ရုံစကေးတော့ မဟုတ်ဘူးနော်။ ဘဲ အယောက် ၂၀ ဆီက iPhone7အလုံး ၂၀ ရတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ .....9+++++
近 日 ，一 名 女 子 用 20 部 手 机 换 房 子 的 新 闻 引 起 人 们 关 注 。
အခုတလော မိန်းကလေးတစ်ယောက်က ဖုန်းအလုံး ၂၀ ကို အခန်းနဲ့ လဲလှယ်လိုက်တဲ့ သတင်းက လူတွေရဲ့ အာရုံစိုက်ခြင်းကို ခံနေရတယ်။
该 女 子 在 一 年 中 ，同 时 交 往 了 20 个 男 友 。
အဲဒီမိန်းကလေးက တစ်နှစ်ထဲမှာ ရည်းစား အယောက် ၂၀ တပြိုင်တည်း ထားလိုက်တယ်။
她 让 每 个 男 友 给 她 买 一 部 iPhone7 ，然 后 再 把 那 些 手 机 卖 掉 。
ရည်းစား တစ်ယောက်ချင်းစီကို iPhone7 တစ်လုံးစီ သူ့ကို ဝယ်ပေးခိုင်းတယ်၊ ပြီးတော့ အဲဒီဖုန်းတွေကို ရောင်းပစ်လိုက်တယ်။
20 台 苹 果 手 机 的 价 格 在 12 万 元 左 右 。
ဖုန်းအလုံး ၂၀ ရဲ့ ဈေးနှုန်းက ယွမ်ငွေ တစ်သိန်းနှစ်သောင်းလောက် ရှိတယ်။
最 后 ，她 用 这 笔 钱 支 付 了 房 子 的 首 付 。
နောက်ဆုံးမှာတော့ သူမဟာ အခန်းဖိုး ကနဦးငွေပေးချေဖို့အတွက် ဒီငွေတွေကို သုံးလိုက်တယ်။
事 后 ，她 的 同 事 们 说 ，想 不 到 她 会 做 这 样 的 事 。
သူမ ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကို လုပ်လိမ့်မယ်လို့ မထင်မိဘူးလို့ အဲဒီအဖြစ်အပျက်တွေ ဖြစ်ပွားပြီးနောက် သူမရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေက ပြောကြတယ်။
很 多 网 友 感 到 震 惊 。
အွန်လိုင်းပေါ်က သူငယ်ချင်းတွေကလည်း အရမ်း တုန်လှုပ်ချောက်ချားသွားကြတယ်။
有 人 问 ，她 是 怎 样 做 到 的 ？
သူမ ဘယ်လိုမျိုး လုပ်လိုက်တာလဲလို့ တချို့က မေးကြတယ်။
有 人 说 ，这 种 做 法 很 可 耻 。
ဒီလိုလုပ်ရပ်မျိုးက အရမ်း ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ တချို့က ပြောကြတယ်။
中 国 的 高 房 价 让 很 多 人 买 不 起 房 子 。
တရုတ်ပြည်ရဲ့ မြင့်မားတဲ့ အခန်းဈေးတွေက လူအများစု ဝယ်ဖို့ မတတ်နိုင်ကြပါဘူး။
但 希 望 大 家 用 正 当 的 方 法 ，比 如 努 力 工 作 ，去 实 现 自 己 的 买 房 梦 。
ဒါပေမယ့် အားလုံးက ရိုးသားတဲ့ နည်းလမ်းနဲ့၊ ဥပမာ အလုပ်ကြိုးစားလုပ်တာမျိုးပေါ့၊ မိမိရဲ့ အခန်းဝယ်ဖို့ အိပ်မက်ကို အကောင်အထည် ဖော်ကြဖို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
1. 近日〔jìnrì〕အခုတလော။ ဒီရက်ပိုင်း
2. 一名〔yìmíng〕တစ်ဦး။ တစ်ယောက်
5. 20部〔èrshí bù〕အလုံး ၂၀
6. 手机〔shǒujī〕ဟန်းဆက်။ ဟန်းဖုန်း
9. 的〔de〕ရဲ့။ ၏။ သော။ က။ တဲ့
11. 引起〔yǐnqǐ〕 ဖြစ်စေသည်
14. 该〔gāi〕၄င်း။ ထို
15. 在...中〔zài...zhōng〕... ထဲမှာ
17. 同时〔tóngshí〕တပြိုင်တည်း။ တချိန်တည်း
18. 交往〔jiāowǎng〕 ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်း
19. 了〔le〕... ခဲ့တယ်။ ပြီးပြီ
20. 20个〔èrshí ge〕အယောက် ၂၀
21. 男友〔nányǒu〕ရည်းစား။ ဘဲ
23. 让〔ràng〕... စေသည်
25. 给〔gěi〕... ကို။ ပေးသည်
28. 然后〔ránhòu〕 နောက်ပြီးတော့
29. 再〔zài〕 နောက်ထပ်။ ထပ်၍
30. 把〔bǎ〕... ကို။ အား
32. 卖掉〔mǎidiào〕 ရောင်းပစ်လိုက်သည်
33. 20台〔èrshí tái〕အလုံး ၂၀
34. 苹果手机〔píngguǒ shǒujī〕iPhone
35. 价格〔jiàgé〕 ဈေးနှုန်း
36. 在〔zài〕... မှာ။ မှာရှိသည်
37. 12万〔shí èr wàn〕တစ်သိန်းနှစ်သောင်း
38. 元〔yuán〕ယွမ်။ တရုတ်ငွေ
40. 最后〔zuìhòu〕 နောက်ဆုံး
41. 这笔钱〔zhèbǐ qián〕ဒီငွေတွေ
42. 支付〔zhīfù〕 ငွေထုတ်ပေးသည်
43. 首付〔shǒufù〕 ကနဦးငွေပေးချေခြင်း
44. 事后〔shìhòu〕 ဖြစ်ပျက်ပြီးမှ
46. 说〔shuō〕 ပြောသည်
47. 想不到〔xiǎng búdào〕မထင်မိဘူး
48. 会〔huì〕... လိမ့်မယ်။ တတ်သည်
49. 做〔zuò〕 ပြုလုပ်သည်
50. 这样的〔zhèyàng de〕ဒီလိုမျိုး
54. 感到〔gǎndào〕ခံစားမိသည်။ ထင်မှတ်သည်
57. 问〔wèn〕 မေးမြန်းသည်
58. 是〔shì〕ဟုတ်သည်။ ဖြစ်သည်
66. 高房价〔gāofángjià〕 မြင့်မားသော အိမ်ဈေးနှုန်း
68. 买不起〔mǎi bùqǐ〕ဝယ်ဖို့ မတတ်နိုင်
70. 希望〔xīwàng〕 မျှော်လင့်သည်
72. 正当〔zhèngdàng〕တရားနည်းလမ်းကျသည်။ ဖြောင့်မတ်သည်
79. 自己〔zìjǐ〕မိမိ။ ကိုယ်တိုင်
80. 买房〔mǎi fáng〕အခန်း ဝယ်သည်
iPhone7အလုံးနှဈဆယျနဲ့ ကောငျမလေး။
တျောရုံစကေးတော့ မဟုတျဘူးနျော။ ဘဲ အယောကျ ၂၀ ဆီက iPhone7အလုံး ၂၀ ရတယျ။ အဲဒီနောကျမှာတော့ .....9+++++
အခုတလော မိနျးကလေးတဈယောကျက ဖုနျးအလုံး ၂၀ ကို အခနျးနဲ့ လဲလှယျလိုကျတဲ့ သတငျးက လူတှရေဲ့ အာရုံစိုကျခွငျးကို ခံနရေတယျ။
အဲဒီမိနျးကလေးက တဈနှဈထဲမှာ ရညျးစား အယောကျ ၂၀ တပွိုငျတညျး ထားလိုကျတယျ။
ရညျးစား တဈယောကျခငျြးစီကို iPhone7 တဈလုံးစီ သူ့ကို ဝယျပေးခိုငျးတယျ၊ ပွီးတော့ အဲဒီဖုနျးတှကေို ရောငျးပဈလိုကျတယျ။
ဖုနျးအလုံး ၂၀ ရဲ့ ဈေးနှုနျးက ယှမျငှေ တဈသိနျးနှဈသောငျးလောကျ ရှိတယျ။
နောကျဆုံးမှာတော့ သူမဟာ အခနျးဖိုး ကနဦးငှပေေးခဖြေို့အတှကျ ဒီငှတှေကေို သုံးလိုကျတယျ။
သူမ ဒီလိုကိစ်စမြိုးတှကေို လုပျလိမျ့မယျလို့ မထငျမိဘူးလို့ အဲဒီအဖွဈအပကျြတှေ ဖွဈပှားပွီးနောကျ သူမရဲ့ လုပျဖျောကိုငျဘကျတှကေ ပွောကွတယျ။
အှနျလိုငျးပျေါက သူငယျခငျြးတှကေလညျး အရမျး တုနျလှုပျခြောကျခြားသှားကွတယျ။
သူမ ဘယျလိုမြိုး လုပျလိုကျတာလဲလို့ တခြို့က မေးကွတယျ။
ဒီလိုလုပျရပျမြိုးက အရမျး ရှကျဖို့ကောငျးတယျလို့ တခြို့က ပွောကွတယျ။
တရုတျပွညျရဲ့ မွငျ့မားတဲ့ အခနျးဈေးတှကေ လူအမြားစု ဝယျဖို့ မတတျနိုငျကွပါဘူး။
ဒါပမေယျ့ အားလုံးက ရိုးသားတဲ့ နညျးလမျးနဲ့၊ ဥပမာ အလုပျကွိုးစားလုပျတာမြိုးပေါ့၊ မိမိရဲ့ အခနျးဝယျဖို့ အိပျမကျကို အကောငျအထညျ ဖျောကွဖို့ မြှျောလငျ့မိပါတယျ။
1. 近日〔jìnrì〕အခုတလော။ ဒီရကျပိုငျး
2. 一名〔yìmíng〕တဈဦး။ တဈယောကျ
5. 20部〔èrshí bù〕အလုံး ၂၀
6. 手机〔shǒujī〕ဟနျးဆကျ။ ဟနျးဖုနျး
9. 的〔de〕ရဲ့။ ၏။ သော။ က။ တဲ့
11. 引起〔yǐnqǐ〕 ဖွဈစသေညျ
14. 该〔gāi〕၎င်းငျး။ ထို
15. 在...中〔zài...zhōng〕... ထဲမှာ
17. 同时〔tóngshí〕တပွိုငျတညျး။ တခြိနျတညျး
18. 交往〔jiāowǎng〕 ပေါငျးသငျးဆကျဆံခွငျး
19. 了〔le〕... ခဲ့တယျ။ ပွီးပွီ
20. 20个〔èrshí ge〕အယောကျ ၂၀
21. 男友〔nányǒu〕ရညျးစား။ ဘဲ
23. 让〔ràng〕... စသေညျ
25. 给〔gěi〕... ကို။ ပေးသညျ
28. 然后〔ránhòu〕 နောကျပွီးတော့
29. 再〔zài〕 နောကျထပျ။ ထပျ၍
32. 卖掉〔mǎidiào〕 ရောငျးပဈလိုကျသညျ
33. 20台〔èrshí tái〕အလုံး ၂၀
35. 价格〔jiàgé〕 ဈေးနှုနျး
36. 在〔zài〕... မှာ။ မှာရှိသညျ
37. 12万〔shí èr wàn〕တဈသိနျးနှဈသောငျး
38. 元〔yuán〕ယှမျ။ တရုတျငှေ
40. 最后〔zuìhòu〕 နောကျဆုံး
41. 这笔钱〔zhèbǐ qián〕ဒီငှတှေေ
42. 支付〔zhīfù〕 ငှထေုတျပေးသညျ
43. 首付〔shǒufù〕 ကနဦးငှပေေးခခြွေငျး
44. 事后〔shìhòu〕 ဖွဈပကျြပွီးမှ
46. 说〔shuō〕 ပွောသညျ
47. 想不到〔xiǎng búdào〕မထငျမိဘူး
48. 会〔huì〕... လိမျ့မယျ။ တတျသညျ
49. 做〔zuò〕 ပွုလုပျသညျ
50. 这样的〔zhèyàng de〕ဒီလိုမြိုး
54. 感到〔gǎndào〕ခံစားမိသညျ။ ထငျမှတျသညျ
57. 问〔wèn〕 မေးမွနျးသညျ
58. 是〔shì〕ဟုတျသညျ။ ဖွဈသညျ
66. 高房价〔gāofángjià〕 မွငျ့မားသော အိမျဈေးနှုနျး
68. 买不起〔mǎi bùqǐ〕ဝယျဖို့ မတတျနိုငျ
70. 希望〔xīwàng〕 မြှျောလငျ့သညျ
72. 正当〔zhèngdàng〕တရားနညျးလမျးကသြညျ။ ဖွောငျ့မတျသညျ
79. 自己〔zìjǐ〕မိမိ။ ကိုယျတိုငျ
80. 买房〔mǎi fáng〕အခနျး ဝယျသညျ
Source: Decipher Chinese
2:47 AM C-Sentence , Chinese
စီးပွားရေးလောကမှာ တခါတရံ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် တဖက်က တောင်းဆိုချက်ကို ငြင်းပယ်ရတဲ့အချိန်မျိုးမှာ ပြောလေ့ရှိတဲ့ နမူနာဝါကျလေးတွေကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
☞ Wǒmen juédìng fàngqì guì gōngsī dìnghuò.
☞ ဝေါ်မဲင်ကျွယ်တင့်(င်)ဖန့်f(င်)ချိ ကွေ့ကုံး(င်)စီး တင့်(င်)ဟော့
☞ ခင်ဗျားတို့ ကုမ္ပဏီနဲ့ ကုန်မှာတာကို ဖျက်မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။
☞ Guì gōngsī suǒ tígōng de jiàgé tài gāo le, suǒyǐ zànshí bú dìnghuò.
☞ ကွေ့ကုံး(င်)စီး စော်ထီကုံး(င်)တဲ့ ကျာ့ကဲယ် ထိုက်ကောင်းလဲာ့ စောယီ ဇန့်zရှီhပူတင့်(င်)ဟော်
☞ ခင်ဗျားတို့ ကုမ္ပဏီက ပေးထားတဲ့ဈေးနှုန်း မြင့်လွန်းလို့ အခုချက်ချင်း ကုန်မမှာနိုင်တာပါ။
☞ Nà yǐhòu zài shuō ba.
☞ နာ့ ယီဟို့ ဇိုက်zရှောhပါ့
☞ ဒါဆို နောက်မှ ထပ်ပြောကြမယ်။
☞ Qǐng zài gěi wǒ liǎngge xīngqī zuò juédìng.
☞ ချင်(င်)ဇိုက်zကေးဝေါ် လျန်(င်)ကဲာ့ရှင်း(င်)ချီး ဇော့zကျွယ်တင့်(င်)
☞ ကျွန်တော် စဉ်းစားဖို့ နှစ်ပတ် အချိန်ပေးပါ။
☞ Nà wǒ děng nín de dáfù.
☞ နာ့ ဝေါတဲင်(င်) နင်တဲ့တာဖုf
☞ ဒါဆို ကျွန်တော်က ခင်ဗျားအဖြေကို စောင့်နေမယ်နော်။
☞ Wǒmen zànshí wúfǎ jiēshòu guì gōngsī suǒ tí de tiáojiàn.
☞ ဝေါ်မဲင်ဇန့်zရှီh ဝူးဖာfကျဲရှို့h ကွေ့ကုံး(င်)စီး စော်ထီတဲ့ ထျောင်ကျန့်
☞ ကျွန်တော်တို့က ခင်ဗျားတို့ တောင်းဆိုချက်ကို အခုချက်ချင်း လက်မခံနိုင်ပါဘူး။
☞ Nà wǒmen kěyǐ zài shāngliang ma.
☞ နာ့ ဝေါ်မဲင်ခဲယ်းယီ ဇိုက်zရှန်းh(င်)လျန်(င်)မား
☞ ကျွန်တော်တို့ ပြန်ဆွေးနွေးနိုင်သေးတယ်လေ။
☞ Suǒ tígōng de shùliàng, wǒmen zhǐ néng dìng yíbàn.
☞ စော်ထီကုံး(င်)တဲ့ ရှုhလျန့်(င်) ဝေါ်မဲင်ကျီhနဲင်(င်) တင့်(င်)ယီပန့်
☞ ခင်ဗျားတို့ပေးတဲ့ ကုန်ပမာဏကို ကျွန်တော်တို့က တဝက်ပဲ ယူနိုင်ပါတယ်။
☞ Hǎo ba.
☞ Jiāohuò qīxiàn kěyǐ yáncháng yíge xīngqī ma?
☞ ကျောင်းဟော့ချီးရှန့် ခဲယ်းယီယန်ချန်h(င်) ယီကဲာ့ရှင်း(င်)ချီးမား
☞ ကုန်လွှဲပေးဖို့ တစ်ပတ် နောက်ဆုတ်လို့ရမလား။
☞ Wǒmen qiàtán de jiéguǒ, juédìng gēn guì gōngsī dìng bǎi fēnzhī sìshí de huò.
☞ ဝေါ်မဲင်ချာ့ထန်တဲ့ ကျဲကော် ကျွယ်တင့်(င်) ကဲင်းကွေ့ကုံး(င်)စီးတင့်(င်) ပိုင်ဖဲင်းfကျီးhစွတ်ရှီhတဲ့ဟော့
☞ ကျွန်တော်တို့ ဆွေးနွေးပြီးပြီ၊ ခင်ဗျားတို့ ကုမ္ပဏီက ကုန်ပစ္စည်း ၄၀% မှာမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
☞ Zhōngguó chǎnpǐn bǐ guì gōngsī de gèngyǒu jìngzhēnglì.
☞ ကျုံးh(င်)ကော်ချန်းhဖျင် ပီ ကွေ့ကုံး(င်)စီးတဲ့ ကဲင့်(င်)ယို ကျင့်(င်)ကျဲင်းh(င်)လိ
☞ တရုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေက ခင်ဗျားတို့ ကုန်ပစ္စည်းထက် ယှဉ်ပြိုင်အား ပိုရှိပါတယ်။
☞ Yīnwèi měiyuán yú miǎnbì de huìlǜ guānxì, wǒmen xiǎng zàntíng zhècì jiāoyì.
☞ ယင်းဝေ့ မေယွမ်းယွီမြန်ပိတဲ့ ဟွေ့လွိကွမ်းရှိ ဝေါ်မဲင်ရှန်(င်) ဇန့်zထင်(င်)ကျဲ့hဆစ်ကျောင်းယိ
☞ ဒေါ်လာနဲ့မြန်မာငွေ ငွေလဲနှုန်း အပြောင်းအလဲများလို့ အခု အရောင်းအဝယ်ကို ခဏ ရပ်ထားပါ့မယ်။
☞ Zhècì juédìng bú dìnghuò le.
☞ ကျဲ့hဆစ် ကျွယ်တင့်(င်) ပူတင့်(င်)ဟော့လဲာ့
☞ ဒီတခါ ကုန်မမှာတော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
တဖကျက တောငျးဆိုခကျြကို ငွငျးပယျခွငျး။
စီးပှားရေးလောကမှာ တခါတရံ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ တဖကျက တောငျးဆိုခကျြကို ငွငျးပယျရတဲ့အခြိနျမြိုးမှာ ပွောလရှေိ့တဲ့ နမူနာဝါကလြေးတှကေို စုစညျးဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
☞ ဝျေါမဲငျကြှယျတငျ့(ငျ)ဖနျ့f(ငျ)ခြိ ကှကေုံ့း(ငျ)စီး တငျ့(ငျ)ဟော့
☞ ခငျဗြားတို့ ကုမ်ပဏီနဲ့ ကုနျမှာတာကို ဖကျြမယျလို့ ကြှနျတျောတို့ ဆုံးဖွတျပါတယျ။
☞ ကှကေုံ့း(ငျ)စီး စျောထီကုံး(ငျ)တဲ့ ကြာ့ကဲယျ ထိုကျကောငျးလဲာ့ စောယီ ဇနျ့zရှီhပူတငျ့(ငျ)ဟျော
☞ ခငျဗြားတို့ ကုမ်ပဏီက ပေးထားတဲ့ဈေးနှုနျး မွငျ့လှနျးလို့ အခုခကျြခငျြး ကုနျမမှာနိုငျတာပါ။
☞ နာ့ ယီဟို့ ဇိုကျzရှောhပါ့
☞ ဒါဆို နောကျမှ ထပျပွောကွမယျ။
☞ ခငျြ(ငျ)ဇိုကျzကေးဝျေါ လနျြ(ငျ)ကဲာ့ရှငျး(ငျ)ခြီး ဇော့zကြှယျတငျ့(ငျ)
☞ ကြှနျတျော စဉျးစားဖို့ နှဈပတျ အခြိနျပေးပါ။
☞ နာ့ ဝေါတဲငျ(ငျ) နငျတဲ့တာဖုf
☞ ဒါဆို ကြှနျတျောက ခငျဗြားအဖွကေို စောငျ့နမေယျနျော။
☞ ဝျေါမဲငျဇနျ့zရှီh ဝူးဖာfကြဲရှို့h ကှကေုံ့း(ငျ)စီး စျောထီတဲ့ ထြောငျကနျြ့
☞ ကြှနျတျောတို့က ခငျဗြားတို့ တောငျးဆိုခကျြကို အခုခကျြခငျြး လကျမခံနိုငျပါဘူး။
☞ နာ့ ဝျေါမဲငျခဲယျးယီ ဇိုကျzရှနျးh(ငျ)လနျြ(ငျ)မား
☞ ကြှနျတျောတို့ ပွနျဆှေးနှေးနိုငျသေးတယျလေ။
☞ စျောထီကုံး(ငျ)တဲ့ ရှုhလနျြ့(ငျ) ဝျေါမဲငျကြီhနဲငျ(ငျ) တငျ့(ငျ)ယီပနျ့
☞ ခငျဗြားတို့ပေးတဲ့ ကုနျပမာဏကို ကြှနျတျောတို့က တဝကျပဲ ယူနိုငျပါတယျ။
☞ ကြောငျးဟော့ခြီးရှနျ့ ခဲယျးယီယနျခနျြh(ငျ) ယီကဲာ့ရှငျး(ငျ)ခြီးမား
☞ ကုနျလှဲပေးဖို့ တဈပတျ နောကျဆုတျလို့ရမလား။
☞ ဝျေါမဲငျခြာ့ထနျတဲ့ ကြဲကျော ကြှယျတငျ့(ငျ) ကဲငျးကှကေုံ့း(ငျ)စီးတငျ့(ငျ) ပိုငျဖဲငျးfကြီးhစှတျရှီhတဲ့ဟော့
☞ ကြှနျတျောတို့ ဆှေးနှေးပွီးပွီ၊ ခငျဗြားတို့ ကုမ်ပဏီက ကုနျပစ်စညျး ၄၀% မှာမယျလို့ ဆုံးဖွတျလိုကျတယျ။
☞ ကြုံးh(ငျ)ကျောခနျြးhဖငျြ ပီ ကှကေုံ့း(ငျ)စီးတဲ့ ကဲငျ့(ငျ)ယို ကငျြ့(ငျ)ကြဲငျးh(ငျ)လိ
☞ တရုတျကုနျပစ်စညျးတှကေ ခငျဗြားတို့ ကုနျပစ်စညျးထကျ ယှဉျပွိုငျအား ပိုရှိပါတယျ။
☞ ယငျးဝေ့ မယှေမျးယှီမွနျပိတဲ့ ဟှလှေိ့ကှမျးရှိ ဝျေါမဲငျရှနျ(ငျ) ဇနျ့zထငျ(ငျ)ကြဲ့hဆဈကြောငျးယိ
☞ ဒျေါလာနဲ့မွနျမာငှေ ငှလေဲနှုနျး အပွောငျးအလဲမြားလို့ အခု အရောငျးအဝယျကို ခဏ ရပျထားပါ့မယျ။
☞ ကြဲ့hဆဈ ကြှယျတငျ့(ငျ) ပူတငျ့(ငျ)ဟော့လဲာ့
☞ ဒီတခါ ကုနျမမှာတော့ဘူးလို့ ဆုံးဖွတျလိုကျပါတယျ။
2:29 AM C-Sentence , Chinese
ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စတွေကို တိုင်ပင်ကြတဲ့အခါ ငွေပေးချေတဲ့စနစ်ကလည်း အရေးကြီးတဲ့ ကဏ္ဍတစ်ခု ဖြစ်တာမို့ ငွေပေးချေတဲ့စနစ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ နမူနာဝါကျလေးတွေကို စုစည်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
☞ Chūkǒu huòkuǎn shì yòng shénme fāngshì jiésuàn?
☞ ချူးhခိုဟော့ခွမ်ရှစ်h ယုံ့(င်)ရှဲhမဲာ့ဖန်းf(င်)ရှစ်h ကျယ်စွမ့်
☞ Export ကို ဘယ်နည်းနဲ့ ငွေရှင်းတာလဲ။
☞ Chūkǒu huòkuǎn jiésuàn, wǒmen zhìjīn réng duōcǎi yòng xìnyòngzhèng, yóuqí shì yǐ bùkě sǎxiāo xìnyòngzhèng wéi jīchǔ de huìkuǎn gēn dānhuìpiào jiésuàn de fāngshì.
☞ ချူးhခိုဟော့ခွမ်ကျယ်စွမ့် ဝေါ်မဲင်ကျိhကျင်း ရဲင်r(င်)တောဆိုင်ယုံ့(င်) ရှင့်ယုံ့(င်)ကျဲင့်h(င်) ယိုးချီရှစ်h ပုခဲယ်စာရှောင်း ရှင့်ယုံ့(င်)ကျဲင့်h(င်) ဝေကျီးချူhတဲ့ဟွေ့ခွမ် ကဲင်းတန်းဟွေ့ဖျောက် ကျယ်စွမ့်တဲ့ဖန်းf(င်)ရှစ်h
☞ Export ကို အများအားဖြင့် Letter of Credit (L/C) ၊ အထူးသဖြင့် L/C ကို မဖျက်သိမ်းခြင်းအပေါ် အခြေခံတဲ့ Documentary Bill စနစ်နဲ့ ငွေရှင်းပါတယ်။
☞ Nǐmen xīwàng yòng hézhǒng huòbì fùkuǎn ne?
☞ နီမဲင်ရှီးဝမ့်(င်) ယုံ့(င်)ဟဲယ်းကျုံh(င်)ဟော့ပိ ဖုfခွမ်နဲ
☞ ခင်ဗျားတို့ ဘာငွေနဲ့ ရှင်းချင်ပါသလဲ။
☞ Rénmínbì huòzhě ōuyuán.
☞ ရဲင်းrမျင်ပိ ဟော့ကျယ်h အိုးယွမ်
☞ တရုတ်ငွေ ဒါမှမဟုတ် ယူရိုငွေ (Euro) နဲ့ ရှင်းချင်ပါတယ်။
☞ Nǐmen jiēshòu fēnqī fùkuǎn fāngshì ma?
☞ နီမဲင်ကျဲရှို့h ဖဲင်းfချီး ဖုfခွမ်ဖန်းf(င်)ရှစ်hမား
☞ ခင်ဗျားတို့က အရစ်ကျ ငွေရှင်းစနစ်ကို လက်ခံပါသလား။
☞ Wǒmen jiànyì shǒuqī fùkuǎn bǎi fēnzhī èrshí, yú'é ànyuè fēnqī fùkuǎn.
☞ ဝေါ်မဲင်ကျန့်ယိ ရှိုhချီးဖုfခွမ် ပိုင်ဖဲင်းfကျီးh အဲာ့rရှီh ယွီးအဲယ် အန့်ယွဲ့ ဖဲင်းfချီးဖုfခွမ်
☞ ပထမဆုံး ၂၀% အရင်ရှင်းပြီး နောက်လတိုင်းမှာ အရစ်ကျစနစ်နဲ့ ငွေရှင်းမယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ အကြံပြုပါတယ်။
☞ Méi wèntí.
☞ Wǒmen jiāng kāilì yǐ guìfāng wéi shòuyìrén de xìnyòngzhèng, yǐ měiyuán jiésuàn.
☞ ဝေါ်မဲင်ကျန်း(င်)ခိုင်းလိ ယီကွေ့ဖန်းf(င်) ဝေရှို့hယိရဲင်rတဲ့ ရှင့်ယုံ့(င်)ကျဲင့်h(င်) ယီးမေယွမ် ကျယ်စွမ့်
☞ ခင်ဗျားတို့က အကျိုးခံစားခွင့် ရသူအနေနဲ့ L/C ဖွင့်မယ်၊ ဒေါ်လာနဲ့ ရှင်းမယ်။
☞ Nà bùxíng, zhǐ néng yǐ ōuyuán jiésuàn.
☞ နာ့ ပုရှင်(င်) ကျီhနဲင်း(င်) ယီအိုးယွမ် ကျယ်စွမ့်
☞ မရပါဘူး၊ ယူရိုနဲ့ပဲ ရှင်းရပါမယ်။
☞ Wǒmen xīwàng chúle ōuyuán zhīwài, guìfāng néng jiēshòu qítā huòbì de fùkuǎn.
☞ ဝေါ်မဲင်ရှီးဝမ့်(င်) ချူhလဲာ့ အိုးယွမ်ကျီးhဝိုက် ကွေ့ဖန်းf(င်) နဲင်(င်)ကျဲရှို့h ချီထားဟော့ပိတဲ့ ဖုfခွမ်
☞ ယူရိုအပြင် တခြားငွေကိုလည်း ခင်ဗျားတို့ လက်ခံနိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
☞ Nǐmen jiēshòu fùkuǎndān fāngshì ma?
☞ နီမဲင် ကျဲရှို့h ဖုfခွမ်တန်း ဖန်းf(င်)ရှစ်hမား
☞ ခင်ဗျားတို့က Advice of Payment စနစ်ကို လက်ခံပါသလား။
☞ Yòng xìnyòngzhèng fùkuǎn shì wǒmen zuì chángyòng de zhīfù fāngshì.
☞ ယုံ့(င်) ရှင့်ယုံ့(င်)ကျဲင့်h(င်)တဲ့ ဖုfခွမ် ရှစ်h ဝေါ်မဲင် ဇွေ့zချန်h(င်)ယုံ့(င်)တဲ့ ကျီးhဖုfဖန်းf(င်)ရှစ်h
☞ ကျွန်တော်တို့ အသုံးများတာက L/C ငွေရှင်းစနစ်ပါ။
☞ Qǐng jìnkuài kāi xìnyòngzhāng, yǐbiàn zhuāngchuán.
☞ ချင်(င်)ကျင့်ခွိုက် ခိုင်း ရှင့်ယုံ့(င်)ကျန်းh(င်) ယီပြန့် ကျွမ်းh(င်)ချွမ်h
☞ သင်္ဘောပေါ် ကုန်တင်ဖို့ L/C ကို မြန်မြန် ဖွင့်ထားပါ။
☞ Qǐng kāi yìzhāng yǐ wǒfāng shòuyìrén de xìnyòngzhèng, jīn'é wéi sānshí wàn ōuyuán, yǒuxiàoqī zhì èr líng yī qī nián wǔyuè sānrì.
☞ ချင်(င်)ခိုင်းယိကျန်းh(င်) ယီ ဝေါ်ဖန်းf(င်) ရှို့hယိရဲင်rတဲ့ ရှင့်ယုံ့(င်)ကျဲင့်h(င်) ကျင်းအဲယ်ဝေ စန်းရှီhဝမ့် အိုးယွမ် ယိုရှောက်ချီး ကျိh အဲာ့rလင်(င်)ယီးချီးနျန် ဝူယွဲ့ စန်းရွတ်r
☞ ကျွန်တော်တို့ဖက်က အကျိုးခံစားခွင့်ရသူ အနေနဲ့ L/C ကို ဖွင့်ပေးပါ။ ငွေပမာဏက ယူရိုငွေ သုံးသိန်းပါ။ သက်တမ်းကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မေလ ၃ ရက်နေ့အထိ လုပ်ပေးပါ။
☞ Zhèzhāng xìnyòngzhèng de yǒuxiàoqī shì duōjiǔ?
☞ ကျဲ့hကျန်းh(င်) ရှင့်ယုံ့(င်)ကျဲင့်h(င်)တဲ့ ယိုရှောက်ချီး ရှစ်h တောကျို
☞ ဒီ L/C ရဲ့ သက်တမ်းက ဘယ်လောက်ကြာမလဲ။
ငှပေေးခခြွေငျး စနဈအကွောငျးကို ဆှေးနှေးကွခွငျး။
ကုနျသှယျရေးကိစ်စတှကေို တိုငျပငျကွတဲ့အခါ ငှပေေးခတြေဲ့စနဈကလညျး အရေးကွီးတဲ့ ကဏ်ဍတဈခု ဖွဈတာမို့ ငှပေေးခတြေဲ့စနဈနဲ့ ပတျသကျတဲ့ နမူနာဝါကလြေးတှကေို စုစညျးဖျောပွလိုကျပါတယျ။
☞ ခြူးhခိုဟော့ခှမျရှဈh ယုံ့(ငျ)ရှဲhမဲာ့ဖနျးf(ငျ)ရှဈh ကယျြစှမျ့
☞ Export ကို ဘယျနညျးနဲ့ ငှရှေငျးတာလဲ။
☞ ခြူးhခိုဟော့ခှမျကယျြစှမျ့ ဝျေါမဲငျကြိhကငျြး ရဲငျr(ငျ)တောဆိုငျယုံ့(ငျ) ရှငျ့ယုံ့(ငျ)ကြဲငျ့h(ငျ) ယိုးခြီရှဈh ပုခဲယျစာရှောငျး ရှငျ့ယုံ့(ငျ)ကြဲငျ့h(ငျ) ဝကြေီးခြူhတဲ့ဟှခှေ့မျ ကဲငျးတနျးဟှဖြေ့ောကျ ကယျြစှမျ့တဲ့ဖနျးf(ငျ)ရှဈh
☞ Export ကို အမြားအားဖွငျ့ Letter of Credit (L/C) ၊ အထူးသဖွငျ့ L/C ကို မဖကျြသိမျးခွငျးအပျေါ အခွခေံတဲ့ Documentary Bill စနဈနဲ့ ငှရှေငျးပါတယျ။
☞ နီမဲငျရှီးဝမျ့(ငျ) ယုံ့(ငျ)ဟဲယျးကြုံh(ငျ)ဟော့ပိ ဖုfခှမျနဲ
☞ ခငျဗြားတို့ ဘာငှနေဲ့ ရှငျးခငျြပါသလဲ။
☞ ရဲငျးrမငျြပိ ဟော့ကယျြh အိုးယှမျ
☞ တရုတျငှေ ဒါမှမဟုတျ ယူရိုငှေ (Euro) နဲ့ ရှငျးခငျြပါတယျ။
☞ နီမဲငျကြဲရှို့h ဖဲငျးfခြီး ဖုfခှမျဖနျးf(ငျ)ရှဈhမား
☞ ခငျဗြားတို့က အရဈကြ ငှရှေငျးစနဈကို လကျခံပါသလား။
☞ ဝျေါမဲငျကနျြ့ယိ ရှိုhခြီးဖုfခှမျ ပိုငျဖဲငျးfကြီးh အဲာ့rရှီh ယှီးအဲယျ အနျ့ယှဲ့ ဖဲငျးfခြီးဖုfခှမျ
☞ ပထမဆုံး ၂၀% အရငျရှငျးပွီး နောကျလတိုငျးမှာ အရဈကစြနဈနဲ့ ငှရှေငျးမယျလို့ ကြှနျတျောတို့ အကွံပွုပါတယျ။
☞ ဝျေါမဲငျကနျြး(ငျ)ခိုငျးလိ ယီကှဖေ့နျးf(ငျ) ဝရှေို့hယိရဲငျrတဲ့ ရှငျ့ယုံ့(ငျ)ကြဲငျ့h(ငျ) ယီးမယှေမျ ကယျြစှမျ့
☞ ခငျဗြားတို့က အကြိုးခံစားခှငျ့ ရသူအနနေဲ့ L/C ဖှငျ့မယျ၊ ဒျေါလာနဲ့ ရှငျးမယျ။
☞ နာ့ ပုရှငျ(ငျ) ကြီhနဲငျး(ငျ) ယီအိုးယှမျ ကယျြစှမျ့
☞ မရပါဘူး၊ ယူရိုနဲ့ပဲ ရှငျးရပါမယျ။
☞ ဝျေါမဲငျရှီးဝမျ့(ငျ) ခြူhလဲာ့ အိုးယှမျကြီးhဝိုကျ ကှဖေ့နျးf(ငျ) နဲငျ(ငျ)ကြဲရှို့h ခြီထားဟော့ပိတဲ့ ဖုfခှမျ
☞ ယူရိုအပွငျ တခွားငှကေိုလညျး ခငျဗြားတို့ လကျခံနိုငျမယျလို့ ကြှနျတျောတို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။
☞ နီမဲငျ ကြဲရှို့h ဖုfခှမျတနျး ဖနျးf(ငျ)ရှဈhမား
☞ ခငျဗြားတို့က Advice of Payment စနဈကို လကျခံပါသလား။
☞ ယုံ့(ငျ) ရှငျ့ယုံ့(ငျ)ကြဲငျ့h(ငျ)တဲ့ ဖုfခှမျ ရှဈh ဝျေါမဲငျ ဇှေ့zခနျြh(ငျ)ယုံ့(ငျ)တဲ့ ကြီးhဖုfဖနျးf(ငျ)ရှဈh
☞ ကြှနျတျောတို့ အသုံးမြားတာက L/C ငှရှေငျးစနဈပါ။
☞ ခငျြ(ငျ)ကငျြ့ခှိုကျ ခိုငျး ရှငျ့ယုံ့(ငျ)ကနျြးh(ငျ) ယီပွနျ့ ကြှမျးh(ငျ)ခြှမျh
☞ သင်ျဘောပျေါ ကုနျတငျဖို့ L/C ကို မွနျမွနျ ဖှငျ့ထားပါ။
☞ ခငျြ(ငျ)ခိုငျးယိကနျြးh(ငျ) ယီ ဝျေါဖနျးf(ငျ) ရှို့hယိရဲငျrတဲ့ ရှငျ့ယုံ့(ငျ)ကြဲငျ့h(ငျ) ကငျြးအဲယျဝေ စနျးရှီhဝမျ့ အိုးယှမျ ယိုရှောကျခြီး ကြိh အဲာ့rလငျ(ငျ)ယီးခြီးနနျြ ဝူယှဲ့ စနျးရှတျr
☞ ကြှနျတျောတို့ဖကျက အကြိုးခံစားခှငျ့ရသူ အနနေဲ့ L/C ကို ဖှငျ့ပေးပါ။ ငှပေမာဏက ယူရိုငှေ သုံးသိနျးပါ။ သကျတမျးကို ၂၀၁၇ ခုနှဈ၊ မလေ ၃ ရကျနအေ့ထိ လုပျပေးပါ။
☞ ကြဲ့hကနျြးh(ငျ) ရှငျ့ယုံ့(ငျ)ကြဲငျ့h(ငျ)တဲ့ ယိုရှောကျခြီး ရှဈh တောကြို
☞ ဒီ L/C ရဲ့ သကျတမျးက ဘယျလောကျကွာမလဲ။
2:20 AM C-Sentence , Chinese
ကုန်ပစ္စည်းတွေ ရောင်းဝယ်ကြတဲ့အခါ ထုတ်ကုန်ရဲ့ အားနည်းအားသာချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဝယ်သူရဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေကို အကြံပြုပြောကြားတဲ့ နမူနာဝါကျလေးတွေကို စုစည်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
☞ Zhè dānjià búhuì bǐ míngpáihuò guì ma?
☞ ကျဲ့တန်းကျာ့ ပူဟွေ့ ပီမျင်း(င်)ဖိုင်ဟော့ ကွေ့မား
☞ ဒါက နာမည်ကြီးတံဆိပ်ထက် ဈေးပိုမကြီးဘူးလား။
☞ Búhuì de.
☞ Nǐmen gōngsī de chǎnpǐn dōu bǐ qítā gōngsī chǎnpǐn jiàgé gāo bǎifēn zhī sān.
☞ နီမဲင်ကုံး(င်)စီးတဲ့ ချန်းhဖျင်တိုး ပီ ချီထားကုံး(င်)စီး ချန်းhဖျင် ကျာ့ကဲယ်ကောင်း ပိုင်ဖဲင်းfကျီးhစန်း
☞ ခင်ဗျားတို့ ကုမ္ပဏီထုတ်ကုန်တွေက တခြားကုမ္ပဏီထက် ဈေးနှုန်း ၃% ပိုမြင့်ပါတယ်။
☞ Wǒmen de chǎnpǐn zhìliàng hěn hǎo a.
☞ ဝေါ်မဲင်တဲ့ ချန်းhဖျင် ကျိhလျန့်(င်) ဟဲင်းဟောင်အား
☞ ကျွန်တော်တို့ ကုန်ပစ္စည်းက ကွာလတီ ပိုကောင်းလို့ပါ။
☞ Wǒmen jiāoyì yě zhème jiǔ le, dōu shì lǎokèhù le, zài piányi xiē ma.
☞ ဝေါ်မဲင် ကျောင်းယိယယ် ကျဲ့hမဲာ့ကျိုလဲာ့ တိုးရှစ်h လောင်ခဲါ့ဟုလဲာ့ ဇိုက်zဖြန်ယိရှဲမား
☞ ကျွန်တော်တို့ အရောင်းအဝယ်လုပ်တာ ဒီလောက် ကြာနေပြီ၊ ဖောက်သည် ဖြစ်နေပြီလေ၊ ထပ်လျှော့ပေးပါအုံး။
☞ Wǒmen zuìduō néng gěi nín piányi bǎifēn zhī líng diǎn wǔ.
☞ ဝေါ်မဲင်ဇွေ့zတော နဲင်း(င်)ကေနင် ဖြန်ယိ ပိုင်ဖဲင်းfကျီးh လင်း(င်)တျန်းဝူ
☞ ကျွန်တော်တို့ အများဆုံး ၀.၅% အထိ လျှော့ပေးနိုင်ပါတယ်။
☞ Zhège jiàgé shì hánshuì le ma?
☞ ကျဲ့hကဲာ့ကျာ့ကဲယ် ရှစ်h ဟန်ရွှေ့hလဲာ့မား
☞ ဒီဈေးနှုန်းထဲမှာ အခွန် ပါပြီးသားလား။
☞ Wǒ juéde nǐmen jīnhòu hái yīnggāi tígāo chǎnpǐn de zhìliàng.
☞ ဝေါ်ကျွယ်တဲ့ နီမဲင် ကျင်းဟို့ ဟိုင်ယင်း(င်)ကိုင်း ထီကောင်း ချန်းhဖျင်တဲ့ ကျိhလျန့်(င်)
☞ နောင်မှာ ခင်ဗျားတို့ ကွာလတီကို မြှင့်တင်သင့်တယ်လို့ ကျွန်တော် ယူဆပါတယ်။
☞ Xièxie, wǒmen huì jìnkuài yánfā zhìliàng gèng hǎo de chǎnpǐn.
☞ ရှဲ့ရှဲ့ ဝေါ်မဲင်ဟွေ့ ကျင့်ခွိုက် ယန်ဖားf ကျိhလျန့်(င်) ကဲင့်(င်)ဟောင်တဲ့ ချန်းhဖျင်
☞ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့က အမြန်ဆုံး သုတေသနလုပ်ပြီး ကွာလတီ ပိုကောင်းတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းကို ထုတ်လုပ်ပါ့မယ်။
☞ Zhèfèn gūjiàdān gēn shàngcì suǒ shuō de bù yíyàng.
☞ ကျဲ့hဖဲင့်f ကူးကျာ့တန်း ကဲင်းရှန့်h(င်)ဆစ် စော်ရှောhတဲ့ ပုယီယန့်(င်)
☞ အဲဒီ ခန့်မှန်းဈေးနှုန်းစာရင်းက အရင်က ပေးထားတာနဲ့ မတူပါဘူး။
☞ Jiāqiáng shòuhòu fúwù.
☞ ကျားချန်(င်) ရှို့hဟို့ ဖူfဝု
☞ ရောင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း ဝန်ဆောင်မှုတွေ ပိုကောင်းအောင် လုပ်ရမယ်။
☞ Yào zēngjiā chǎnpǐn de Yīngwén shuōmíng jièshào.
☞ ယောက်ဇဲင်းz(င်)ကျား ချန်းhဖျင်တဲ့ ယင်း(င်)ဝဲင် ရှောhမျင်(င်) ကျဲ့ရှောက်h
☞ ကုန်ပစ္စည်း အသုံးပြုပုံကို အင်္ဂလိပ်လို ရှင်းလင်းချက် ထပ်ထည့်ရမယ်။
ဈေးဝယျသူရဲ့ ထငျမွငျခကျြကို အကွံပွုပွောကွားခွငျး။
ကုနျပစ်စညျးတှေ ရောငျးဝယျကွတဲ့အခါ ထုတျကုနျရဲ့ အားနညျးအားသာခကျြတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး ဝယျသူရဲ့ ထငျမွငျခကျြတှကေို အကွံပွုပွောကွားတဲ့ နမူနာဝါကလြေးတှကေို စုစညျးဖျောပွလိုကျပါတယျ။
☞ ကြဲ့တနျးကြာ့ ပူဟှေ့ ပီမငျြး(ငျ)ဖိုငျဟော့ ကှမေ့ား
☞ ဒါက နာမညျကွီးတံဆိပျထကျ ဈေးပိုမကွီးဘူးလား။
☞ နီမဲငျကုံး(ငျ)စီးတဲ့ ခနျြးhဖငျြတိုး ပီ ခြီထားကုံး(ငျ)စီး ခနျြးhဖငျြ ကြာ့ကဲယျကောငျး ပိုငျဖဲငျးfကြီးhစနျး
☞ ခငျဗြားတို့ ကုမ်ပဏီထုတျကုနျတှကေ တခွားကုမ်ပဏီထကျ ဈေးနှုနျး ၃% ပိုမွငျ့ပါတယျ။
☞ ဝျေါမဲငျတဲ့ ခနျြးhဖငျြ ကြိhလနျြ့(ငျ) ဟဲငျးဟောငျအား
☞ ကြှနျတျောတို့ ကုနျပစ်စညျးက ကှာလတီ ပိုကောငျးလို့ပါ။
☞ ဝျေါမဲငျ ကြောငျးယိယယျ ကြဲ့hမဲာ့ကြိုလဲာ့ တိုးရှဈh လောငျခဲါ့ဟုလဲာ့ ဇိုကျzဖွနျယိရှဲမား
☞ ကြှနျတျောတို့ အရောငျးအဝယျလုပျတာ ဒီလောကျ ကွာနပွေီ၊ ဖောကျသညျ ဖွဈနပွေီလေ၊ ထပျလြှော့ပေးပါအုံး။
☞ ဝျေါမဲငျဇှေ့zတော နဲငျး(ငျ)ကနေငျ ဖွနျယိ ပိုငျဖဲငျးfကြီးh လငျး(ငျ)တနျြးဝူ
☞ ကြှနျတျောတို့ အမြားဆုံး ဝ.၅% အထိ လြှော့ပေးနိုငျပါတယျ။
☞ ကြဲ့hကဲာ့ကြာ့ကဲယျ ရှဈh ဟနျရှေ့hလဲာ့မား
☞ ဒီဈေးနှုနျးထဲမှာ အခှနျ ပါပွီးသားလား။
☞ ဝျေါကြှယျတဲ့ နီမဲငျ ကငျြးဟို့ ဟိုငျယငျး(ငျ)ကိုငျး ထီကောငျး ခနျြးhဖငျြတဲ့ ကြိhလနျြ့(ငျ)
☞ နောငျမှာ ခငျဗြားတို့ ကှာလတီကို မွှငျ့တငျသငျ့တယျလို့ ကြှနျတျော ယူဆပါတယျ။
☞ ရှဲ့ရှဲ့ ဝျေါမဲငျဟှေ့ ကငျြ့ခှိုကျ ယနျဖားf ကြိhလနျြ့(ငျ) ကဲငျ့(ငျ)ဟောငျတဲ့ ခနျြးhဖငျြ
☞ ကြေးဇူးတငျပါတယျ၊ ကြှနျတျောတို့က အမွနျဆုံး သုတသေနလုပျပွီး ကှာလတီ ပိုကောငျးတဲ့ ကုနျပစ်စညျးကို ထုတျလုပျပါ့မယျ။
☞ ကြဲ့hဖဲငျ့f ကူးကြာ့တနျး ကဲငျးရှနျ့h(ငျ)ဆဈ စျောရှောhတဲ့ ပုယီယနျ့(ငျ)
☞ အဲဒီ ခနျ့မှနျးဈေးနှုနျးစာရငျးက အရငျက ပေးထားတာနဲ့ မတူပါဘူး။
☞ ကြားခနျြ(ငျ) ရှို့hဟို့ ဖူfဝု
☞ ရောငျးပွီးတဲ့နောကျပိုငျး ဝနျဆောငျမှုတှေ ပိုကောငျးအောငျ လုပျရမယျ။
☞ ယောကျဇဲငျးz(ငျ)ကြား ခနျြးhဖငျြတဲ့ ယငျး(ငျ)ဝဲငျ ရှောhမငျြ(ငျ) ကြဲ့ရှောကျh
☞ ကုနျပစ်စညျး အသုံးပွုပုံကို အင်ျဂလိပျလို ရှငျးလငျးခကျြ ထပျထညျ့ရမယျ။
2:02 AM C-Draw , Chinese
ဒီဂရီပြ ကြိယာဝိသေသန တစ်ခုဖြစ်တဲ့ 很 ဆိုတာ “အရမ်း။ သိပ်” လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ အသုံးအများဆုံး စကားလုံးတစ်လုံးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
1:56 AM C-Draw , Chinese
သင် ဘယ်လိုအ၀တ်အစားမျိုးကို ကြိုက်ပါသလဲ။ “အ၀တ်အစား” ကိုတော့ တရုတ်လို 衣 လို့ ခေါ်ပါတယ်။ လေ့လာထားသင့်တဲ့ စာလုံးလေးပါ။
တချို့က အပြုံးမျက်နှာလေးတွေနဲ့ အရမ်း ကျက်သရေရှိကြတယ်။ “မျက်နှာ” ကို တရုတ်လို 脸 လို့ ခေါ်တယ် ဆိုတာလေးလည်း မှတ်ထားကြပါအုံးနော်။
1:46 AM C-Draw , Chinese
“အပြား။ အချပ်” စတာတွေကို တရုတ်လို 片 လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီနေ့အတွက် ရေးသားလေ့ကျင့်ဖို့ ရွေးချယ်ပေးလိုက်တဲ့ တရုတ်စာလုံးလေးပါ။